830nm 2W 50um Fiber နှင့် Diode Laser ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > 830nm 2W 50um Fiber Diode Laser ကိုတွဲဖက်ပေးသည်
830nm 2W 50um Fiber Diode Laser ကိုတွဲဖက်ပေးသည်
830nm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser သည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြင့်မားခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောရောင်ခြည်အရည်အသွေးတို့ဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်များသည်လေဆာရောင်ခြည် diode ချစ်ပ်မှအချိုးမညီသောဓါတ်ရောင်ခြည်ကို micro micro optics သုံး၍ core အချင်းသေးငယ်သည့် output fiber သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ ရှုထောင့်တိုင်းတွင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်မီးရှို့ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊
830nm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser ၏ ၁။ အကျဉ်းချုပ်
830nm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser ၏ ၂။ နိဒါန်း
830nm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser ၏ထူးခြားချက်များ
50/125 0.22NA Fiber;
4.3030mm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser ကိုအသုံးပြုခြင်း
830nm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ)
ဖိုင်ဘာ core ကို / ဝတ်အချင်း DCOR - 50/125 - μm / μm
6. ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် 830nm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser
၇။ ကယ်ဆယ်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း 830nm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser
hot Tags:: 830nm 2W 50um Fiber Coupled Diode Laser, ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊